July Dream: 2009 Summary
Posted by JulyDream at 11:56 PM
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလူသားတယောက်အတွက် ဖြူစင်အေးချမ်းတဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ၂၀၁၀ က သယ်ဆောင်လာပါစေ။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံက ရွေ့တော့မရွေ့ပေမယ့် ပုံစံပြောင်းသွားပြီ..ဆိုတော့ . . .
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုတောင်းတွေ ပြည့်ပါစေ =)
တနေ့တလံ ပန်းကန် မီးဖိုချောင်ထဲမှာမို့
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုဂျူလိုင်ရေ...
အပြုံးတု တွေ မရှိမဲ့ နှစ်သစ်ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
၂၀၁၀ကုန်လို့ ဒီစာမျိုးထပ်ရေးရင် ပျော်ရွှင်တွေ့အပြည့်၊ အောင်မြင်မှုတွေ့အပြည့်နဲ့ စာမျိုးရေးနိုင်ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုဂျူလိုင်
၂၀၁၀ မှာ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေများများ ရနိုင်ပါစေ
ကွဲတဲ့ အသည်း ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန်ဆက်လိုက်နိုင်တာ cheers! ပါ
julyDream: The object ofanew year is not that we should haveanew year. It is that we should haveanew soul.
အထူးသဖြင့် ငါ ချစ်ခင်သူတွေဆီကပေါ့။
အထူးသဖြင့် ငါ ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။
2009 Summary ကို ကဏ္ဍစုံလင်စွာနဲ့ ရေးထားတာ အားကျပါတယ် . . ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်း ပြန်သုံးသပ်ရအုံးမှာ..
ခရီးသွားခဲ့တာတွေ အလှူအတန်းလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ် ဘ၀တလျှောက် အပြုံးတုတွေနဲ့ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ
၂၀၁၀ နှစ်မှာလဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ
January 1, 2010 at 11:09 PM
ရီမိုးပြည့်said...
ရဲရဲရင့်ရင့် အတွေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း လန်းဆန်း လတ်ဆတ်နေနိုင်ပါစေ....
ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်ရတယ်ဆိုဘဲ။ အချစ်မျောတော့အချစ်နဲ့လိုက်ပေါ့။ အားကျမနာလို မဖြစ်. မုဒိတာဖြစ်ပါ၏။ အပြုံးတစ်ပွင့် ဖျတ်ခနဲ လင်းလက်သွားတယ်။ ဆိုတော့ အသားမဲလို့ဖြစ်ရမယ်။ တယောထိုးရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ အိမ်ပြောင်းရမှာပေါ့။ သုံးခါမြောက်လာဖတ်သည်။ အပြုံးအစစ်ဖြင့်လာပါသည်။ ၂၀၀၉ ခံစားချက များစွာနဲ့မို့လို့။က အကျယ်ချဲ့ရင်တော့မကုန်ထင်ရဲ့။ နစ်သစ်မှာ ချမ်းမြေ့ပါစေ ဂျုလိုင်။ိ
၂၀၀၉ အနှစ်ချုပ်လေးရေးထားတာ သဘောကျသွားပါတယ်။ ရွှေရုပ်လေး ကောက်ရသွားတဲ့အတွက်တော့ ကြားကနေ ၀မ်းသာနေမိပြန်တယ်..:)
ကိုဂျူလိုင်ရေ..နှစ်သစ်မှာ အပြုံးတုများနဲ့ ကင်းဝေးပြီး ဖြူစင်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ မေတ္တာတရားတွေနဲ့ နွေးထွေးပျော်ရွှင်ပါစေလေ..
သပ်ရပ်တိကျတဲ့ 2009 Summary ကို ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ 2009 ထဲက လှုမှုရေးကူညီမှုတွေမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့လို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ထပ်ပြောပါရစေ ကို July ရေ။ 2010 က အောင်မြင်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုပဲ သယ်ဆောင်လာပါစေ...
နှစ်သစ်မှာ ရွှေရုပ်ကလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။။
'အပုပ်ချခံရတဲ့သူတွေခမျာ အပူအပုပ်တွေ ကင်းသွားရှာတယ်' ဆိုလို့ ရယ်မိတယ်..
၂၀၁၀ ဆုတောင်းကတော့ မတောင်းပေးတော့ပါဘူး ၁လတောင် ကုန်သွားပြီပဲ..